Mpandrindra ny famokarana - Tianjin Panda Technology Group Co., Ltd
1.Fanavaozana ny vokatra.Ny fampifangaroana ny drafitra stratejika an'ny orinasa, ny valin'ny fikarohana momba ny tsena ary ny fepetra takian'ny mpanjifa, mamolavola torolàlana momba ny fampandrosoana ny vokatra, mampiseho ny fahafahan'ny vokatra vaovao ary mandamina ny fampiharana;
2.Fanavaozana ara-teknika.Angony sy alamino tsy tapaka ny fampahalalana ara-teknika momba ny fampandrosoana ny vokatra mitovy amin'izany eto an-toerana sy any ivelany, ary ampiharo amin'ny asa azo ampiharina.Tazony ny fahatsapan-tena amin'ny vokatra sy ny teknolojia vaovao ao an-trano sy any ivelany, ary ampifandraiso amin'ny toe-javatra misy ny orinasa mba hivoatra mavitrika;
3.Fanatsarana ny kalitao.Mandamina ny famantarana sy ny famerenana ny zava-bitan'ny R&D, mamakafaka sy mamintina ny traikefa sy lesona amin'ny fizotran'ny R&D, ary manatsara hatrany ny kalitaon'ny R&D.
Manana workshp phosphating zavamaniry izahay, tsy misy fitsaboana phosphating ny frame.
Dingana fitsaboana tsy misy phosphation:
DINGANA VARNISH FOTOANA
Telo famafazana telo fanaova dingana, ka ny fiara mandoko mafy kokoa, fanamiana, mamirapiratra
Ny orinasanay dia tsy mampiasa film standard, tsara tarehy ny loko, mipoaka amin'ny masoandro, tsy levona ao anatin'ny herintaona.
Tsy misy film sticker Famokarana dingana: midira ao amin'ny lafaoro amin'ny mari-pana ambany 80 ℃ mba hanendasany, mamorona sarimihetsika, peel eny, dia midira ao amin'ny lafaoro amin'ny 150 ℃ mba hanendasany indray, avy ao amin'ny lafaoro mangatsiaka voajanahary.
Ny orinasanay manokana phosphating atrikasa, loko atrikasa, roa fivoriambe andalana, fanaraha-maso ny kalitao sy ny sampana hafa, fiaraha-miasa, manara-penitra famokarana.
Fanaraha-maso ny fizotran'ny famokarana:
Mamokatra fenitra SOP
No.1Ny fenitra SOP an'ny Derailleur: Ny antoka lehibe sy ny fifindran'ny fifandraisana amin'ny ampahany tsirairay amin'ny fampiasana flexible, tsy misy korontana, ho an'ny bisikileta manome hery tonga lafatra.
No.2Ny fenitra SOP Front Fork sy Frame: Avelao ny Fork Front, Stem ary Frame hivoaka alohan'ny fifandraisana amin'ny US, hiantohana ny fahafaha-mamily, tsy hanimba ny loko.